Shiinaha FB-39 SPLIT SET BOLT (Stabilizer Stricilizer) iyo soosaarayaasha | TRM
FB-39 BOLT SETIT SETIT
Taageero dhulka ku salaysan ama dib loo xoojiyay Split Set Bolt oo loo adeegsado codsiyada, Dia.39mm C tubbada jirka boolku waxay bixin kartaa xoog isku dhac oo degdeg ah oo isku haya dhagaxa, sidaa darteed waxaa sidoo kale si weyn loogu adeegsadaa miinooyinka, godadka dhulka hoostiisa iyo meelaha dhaadheer iwm. Hase yeeshee, dhanka kale, xoogga maaddada iyo dabeecadda iyo tayada alxanka u dhexeeya giraanta iyo tuubada C, ayaa noqda qodobbo muhiim u ah.
Tijaabinta jiiditaanku waa mid ka mid ah tijaabooyinka ugu muhiimsan ee FB-39 Split Set Bolt, natiijadu waxay kuxirantahay alaabta ceeriin ah, waxaan tusi doonaa macaamilka warbixinta tijaabada gabi ahaanba oo ay weheliso diiwaanka baaritaanka kormeerka oo buuxa si loo hubiyo tayada alxanka koox kasta oo ka mid ah Bolts Set Split.
Waxaan ku jirnay xariiqdan in ka badan 10 sano, waxaanan iskaashi la samaynay macaamiil badan oo caan ku ahaa goobtan, rolleformers-ka faa'iidooyinka iyo alxanka si ay nooga dhigaan inaan noqonno kuwa ugu weyn ee u qalma kala-goynta go'an (xasilinta xarkaha isku-darka) ee Shiinaha, oo hel ku ammaano tayo iyo adeeg joogto ah oo wanaagsan oo noqo alaab -qeybiyeyaal shirkado badan oo macdanta caan ka ah aagag iyo dalal kala duwan oo adduunka ah.
Waa gebi ahaanba aad muhiim ugu ah alxanka daloolayaasha kala -goynta ee kala -go'a oo inta badan saameeya wax -qabadka suunka inta loo isticmaalayo taageerada dhulka. Waxaan leenahay nidaamka xakamaynta tayada joogtada ah iyo nidaamka digniinta si aan u helno tayada welds kaamil ah oo deggan oo joogto ah, iyo diiwaanka socotada shaqada ayaa waliba mari doona wax soo saarka oo dhan si loo hubiyo in wax walba si sax ah loo hubiyo.
Miisaanka Zinc sidoo kale waa qodob muhiim ah haddii macaamilku u baahan yahay Galvanized Split Set Bolt. Iyada oo leh heer hoose oo ah Si & P, kala -goynta go'an ee kala -goynta ah waxay heli kartaa dusha sare ee dahaarka zinc si ay u yeelato waxqabad wanaagsan marka loo adeegsado deegaanka daxalka leh. Darajo kala duwan oo maaddo leh dherer kala duwan ayaa la heli karaa. Bool madow ayaa sidoo kale la heli karaa Xirmada caadiga ah ee FB-39 Split bolt waa 150 untis halkii sariirta alwaax ama biraha.
FB-39 SPLIT SET SIFTIFICATION IYO HANTIDA FANKA
Cabirka Guryaha Jidhka ah Xogta Farsamada
Ballaca Bolt A 39mm Xoog -dhalid Ugu yaraan 345 Mpa (85KN) Cabbirka Inyar ee Caadiga ah ayaa lagu taliyay 35-38mm
Dhererka Bolt B 0.6-2.4m Caadiga ah 445Mpa (110KN)
Ballaca Dhammaadka Taper C 30mm Tube Xoogga Sillaalka Ugu Dambeeya Ugu yaraan 470 Mpa (115KN) Awoodda Jebinta Caadiga ah 124KN
Daabacaadda Wide ballaaran D 2mm Caadiga ah 530Mpa (130KN)
Dhererka Taper E 65mm Mass halkii mitir 1.92 Kgs Ugu yaraan Awoodda Jebinta 89KN
Bolt Afyare Wide F 17mm
Goobta Giraanta G 3mm Aagga Isgoyska 245 mm² Barroosinka Hore ee Lagu Taliyay 3-6 Tons (27-53 KN)
Guage Maaddada H 2/2.5mm
Giraanta Siligga Giraanta I 6mm Heerka Ballaca Godka 35-38mm Cadaadiska Axial Ultimate Caadiga ah 21% (Thk <16mm)
Farqiga Furan ee Giraanta J 5-6mm
Xeer Sharaxaada Bolt Dhexroor Dhererka Dhammaadka Dhulka Miisaanka Xirxirida QTY/sariirtaada Aqoonsiga Midabka Giraanta
(mm) (mm) (Boqorradii)
FB39-0600 Kala Qaybi Bolt 39-600 39 600 Aan la daaweyn 1.20 150 -
FB39-0900 Kala Qaybi Bolt 39-900 39 900 Aan la daaweyn 1.70 150 -
FB39-1200 Kala Qaybi Bolt 39-1200 39 1200 Aan la daaweyn 2.40 150 -
FB39-1800 Kala Qaybi Bolt 39-1800 39 1800 Aan la daaweyn 3.23 150 -
FB39-2400 Kala Qaybi Bolt 39-2400 39 2400 Aan la daaweyn 4.30 150 -
FB39-0600G Bolt Set Bolt 39-600 HDG 39 600 Dhex kulul Galvanized 1.26 150 -
FB39-0900G Kala Qaybi Bolt 39-900 HDG 39 900 Dhex kulul Galvanized 1.80 150 -
FB39-1200G Bolt Set Bolt 39-1200 HDG 39 1200 Dhex kulul Galvanized 2.50 150 -
FB39-1800G Kala Qaybi Bolt 39-1800 HDG 39 1800 Dhex kulul Galvanized 3.38 150 -
FB39-2400G Bolt Set Bolt 39-2400 HDG 39 2400 Dhex kulul Galvanized 4.50 150 -
FB-39 SPLIT SET BOLT TILMAAMAHA
● Ma aha sida FB-47 Split Set bolt, FB-39 Spt set bolt waxaa loo baahan karaa iyadoo la adeegsanayo darajo kala duwan oo maaddo ah waxay kuxirantahay bay'ada isticmaalka kala duwan si loo badbaadiyo qiimaha taageerada dhulka
Same Waxay la mid tahay sida loo kala qaybiyey, FB-39 Split Set Bolt sidoo kale waa habka ugu fudud uguna waxtarka badan ee taageerada dhulka, waa qaab-dhismeedka C oo bixinaya taageero dherer dhererkeedu dhan yahay oo degdeg ah ilaa godka, iyadoo la adeegsanayo mesh iyo saxan si aad u hesho isu -soo -bax deg -deg ah iyo shaqo taageero wanaagsan leh
V Galvanizing iyo Bolts Split Set Bolts labaduba waa la heli karaa
Accessories Qalabyo kala duwan oo buuxa ayaa la heli karaa
Su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee FB-39 SET BET BET
FB-39 Split Set Bolt waxaa lagu sameeyaa darajooyin kala duwan oo birta birta ah, taas oo loo rogay duleel C dherer dhererkiisu dhan yahay. Giraanta birta ah ayaa si buuxda loogu xardhay dhamaadka tuubada iyada oo la adeegsanayo qalab alxanka otomaatig ah, kaas oo ah in taargooyinka lagu hayo dusha dhagaxa.
Qaabka tuubada C ee boolku wuxuu soo saaraa rar kala wareejinaya birta ilaa dhagaxa marka lagu rakibo dalool yar oo dhexroor ah, waxayna keentaa culeys iska-caabin ah oo jiidista tuubada daloolka, waxayna abuurtaa cadaadis shucaac oo dhererkiisu dhan yahay daloolka iyada oo la kordhinayo dusha xiriirka ee birta dhagaxa sababta oo ah qaabka tuubada, iyo marka lagu rakibo saxanka, waxay dejisaa xoog cadaadis ah oo ka soo horjeeda dhagaxa. Marka loo baahdo awoodda qaadista dheeraadka ah ee xamuulka, boorsada isku -shaandheynta waxaa lagu dhejin karaa grouts sibidhka.
Qoorta jiida oo ku dheggan dhammaadka giraantu waxay awood u siisaa tijaabinta culeyska inta lagu jiro rakibidda suunka. Dhamaadka duubka leh ee suunka isku dhaca ayaa si sahlan loo gelin karaa godadka la qoday. Bolt friction waxaa lagu rakibi karaa mid gacanta lagu hayo ama qalab farsameysan, sida jackdrill, stopper, jumbo bolting bolting, ama nooc kasta oo kale oo daloolin ah.
Hore: FB-33 SOLIT SET BOLT (Xallinta Xasilinta)
Xiga: FB-47 SOLIT SET BOLT (Xasilinta Khilaafka)
Miinada Kala Qaybsanaanta
Iskudhufasho Kala Qaybsanaanta Bolt
Deji Kala Deji Bolt Stabilizer